Syncari: Midee oo Maaree Xogta Waxqabad ee Iskudhafka ah, Toos u samee qulqulka socodka iyo u qaybinta aragtiyada aaminka ah meel kasta. | Martech Zone
Shirkadaha ayaa ku liqaaya xogta ku urursan CRM-da, otomaatiga suuq geynta, ERP, iyo ilaha xogta kale ee daruuraha. Marka kooxaha hawlgalka ee muhiimka ahi ku heshiin waayaan xogta ka turjumaysa runta, waxqabadka ayaa la xakamaynayaa ujeeddooyinka dakhliguna way adag tahay in la gaaro. Syncari waxay rabtaa inay nolosha u fududeyso dadka ka shaqeeya suuqyada suuqgeynta, iibka iibka, iyo dakhliga soo gala kuwaas oo had iyo jeer la halgama xogta ka hor imaanaysa gaaritaanka ujeedooyinkooda.
Syncari waxay qaadaysaa qaab cusub oo loogu talagalay isdhexgalka, otomatiga, iyo maaraynta xogta. Nidaamkooda xog dhammeystiran ee mideysan, dhibcaha, iyo nadiifinta xogta dhammaan nidaamyadaada sare. Si ka duwan Workato ama MuleSoft, Syncari waxay bixisaa shaqooyin maareyn xogeed oo xog la'aan ah si ay uga caawiso xirfadleyda howlaha inay otomatiga uga shaqeyso xogta ay ku kalsoon yihiin. Barxadda maaraynta xogta ayaa markaa u qaybisa xogta la aaminay iyo aragti ku noqoshada waax kasta isha runta oo nidaamyadan ku habeeyaan midba midka kale sida xogta ka soo ifbaxaysa. Tani waxay ka xoreyneysaa kooxahaaga culeyska baaritaanka xogta gacanta iyo nadiifinta iyadoo la xariiqayo iyo otomatiga kobcinta xogta, caadiyeynta, iyo dib-u-marinta.
Syncari waa hab fiican oo lagu casriyeeyo xog uruurinta shirkad. Waxay si gaar ah isugu daraysaa awooda FiveTran, bakhaar xog ah (tusaale Snowflake), iyo Tirakoobka / Hightouch oo hal madal oo dhameystiran si fudud loogu fududeeyo isdhexgalka dhamaadka ilaa dhamaadka. Syncari ayaa isku dhafan isdhexgalka, otomatiga, iyo maaraynta xogta hal madal oo dhameystiran si qof walba loogu awood siiyo inuu xakameeyo fowdadan adoo qaadaya qaabkii ugu horreeyay ee xogta ah.
Nidaamka Maareynta Macluumaadka ee 'Syncari' wuxuu bixiyaa:
Qaabka xogta midaysan - Nidaam kastaa wuxuu macaamiisha ugu qeexaa qaab waxyar ka yara duwan. Tan waanu idiinka kaa dhignay, markaa nidaamyadaadu waxay ku wada hadli karaan isku af.
Isku duwidda jihooyinka badan - Hayso xogta nidaamka iskutallaabta iyada oo lala jaan qaadayo mashiinkeena macaamil ganacsi ee patent-ka sugaya kaas oo ilaaliya gobolka isla markaana xukuma xogta dhammaan nidaamyada ku xiran si otomaatig ah
Maareynta qorshaha iswada - Marka meelaha cusub lagu daro ama laga saaro ilaha xog kasta, Syncari waxay si otomaatig ah u cusbooneysiisaa dhammaan geeddi-socodka la saameeyay Nabadgelyo jabinta isbeddelada!
Maareynta xogta loo qeybiyey - Aaladda otomaatiga ah iyo siyaasadaha xogta ee lagu abuuray Syncari waxay la falgalaan ilo kasta oo xog ah oo ku xiran moodeelka xogta midaysan, oo awood siineysa joogtaynta xogta aan horay loo arag.
Si ka duwan dhaqanka xirayaasha, Syncari Synapses waxay si qoto dheer u fahmaan nidaamyada dhamaadka nidaamka, waxay bixiyaan isdhexgal qoto dheer oo loogu talagalay howlaha gaarka ah sida isku darista iyo jilicsanaanta-tirtirka, iyo maareynta saameynta isbedelada qorsheyaasha ee dhammaan Synapse ku xiran. Maktabadooda isku-dhafan waxaa ka mid ah Airtable, Amazon S3, Amazon Redshift, Amzon Kinesis, Amplitude, Drift, Eloqua, Intercom, Microsoft Dynamics 365, Freshworks CRM, Gainsight, Google BigQuery, Google Sheets, Hubspot, Jira, Marketo, Mixpanel, MySQL, NetSuite , Outreach, Salesforce Pardot, Pendo, PostgreSQL, Salesforce CRM, Sage Intactt, SalesLoft, Snowflake, Workday, Xero, Zendesk, and Zuoro.
Codso Demo Syncari
Tags: Redshift Amazonamazon s3IlodanimadaAmzon KinesisqalabayntaTirakoobkalambar lahaynisdhexgalka codelessotomaatiga xogtaIsdhexgelinta xogtamaamulka xogtamadal maaraynta xogtakeydka xogtajiididda iyo dhibicjiid iyo hoos u dhexgalkamiyigiicodkarnimoganacsixogta shirkaddaFivetranShaqooyinka cusub ee CRMaragtidaGoogle BigQueryWaraaqaha Googledusha sarehubspotdhexgalkaintercomJiramaamul xogtasuuqodhaqdhaqaaqa microsoft 365MixpanelMySQLnetsuitewacyigelinPendoPostgreSQLSage Intacttiibiyaha xoogga crmcafiska iibkaIibintaSnowflakeisha runtaMaalinta ShaqadaXerozendeskZuora
Waad ku mahadsantahay daboolidaada. Tani si wanaagsan ayaa loo qoray! Aad baa loo mahadiyey oo haddii aan kaa caawin karo si uun, ha ka waaban inaad gaadho.
Waad ku mahadsantahay qoraalka, Nick! Waxaan rajeyneyaa inaan si qoto dheer wax ugu qeybiyo - waxaan durba u diray macluumaad qaar ka mid ah asxaabta